Ofisialy, eo amin'ny Crackberry aho. Martech Zone
Ofisialy izany, eo amin'ny Crackberry aho
Alarobia, Jolay 1, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Rehefa afaka volana sy volana maro nifanakalozana hevitra dia nanao ilay taratasy ihany aho ary nividy a Curve Blackberry 8330 anio alina ao amin'ny fivarotana Verizon.
Nampiasa efijery mikasika an'i Samsung aho nandritra ny herintaona ary tsy nahatratra antso tsy tambo isaina aho, tsy afaka nampifanindry ny kalandrie ary tsy mahazaka mijery azy hamaly antso.
Tena mpankafy an'i Apple aho, saingy nanelingelina ny iPod Touch nataoko tamin'ny volana lasa teo mba hahitana raha afaka zatra amin'ilay efijery mikasika aho. Tsy afaka aho. Ho anao izay milaza fa mihamora kokoa dia tsy… Tsy mila telefaona iray izay tokony hojereko hampiasa azy io.
RNH, toa ahy fa ny efijery mikasika dia nampiala antsika dingana hafa fa tsy amin'ny ho avy.
Ary koa, be loatra ny namako nifindra tany amin'ny Blackberry. Chris Baggott, Tale jeneralin'ny Compendium na dia nesoriny aza ny iPhone-neny mba hiverina amin'ny Blackberry. Adam Small, CEO an'ny Finday finday, efa nanandrana niresaka ahy ho Blackberry nandritra ny fotoana kelikely. Ary namana vaovao Vanessa Lammers Nolazainy tamiko fa tena nahafinaritra azy ny Blackberry.
Heck, raha tsy vitan'ny filoha Obama raha tsy eo ny Crackberry, azoko an-tsaina fotsiny hoe lehibe tokoa ny serivisy sy ny vokatra. Anio hariva aho dia mamantatra fotsiny ny fomba hanaovana sy fandraisana antso an-tariby. Araka ny tolo-kevitr'i Adam, nisintona ny Twitterberry aho mba hahafahako farafaharatsiny afaka mibitsika avy ao!
Ka… ianareo mpidoroka Crackberry rehetra, ampahafantaro ahy ny Apps tianao indrindra!
Tags: ahrefslaboratoara fahefanapowerlabsfamirapiratanafanarahana laharanafananganana wordpress
1 Jul 2009 amin'ny 11:00 PM
Miarahaba ny maha-olona niova fo. Mila tsy mitovy hevitra aminao aho momba ny efijery mikasika. Tamin'ny Alahady dia nanatsara ny Blackberry ho eo amin'ny efijery fikitika Storm ary tiako izany. Hitako fa mora be ny mampiasa azy io ary tsara ny fananana tranokala mirindra.
Hanao doka aho fa roa taona lasa izay rehefa nifindra tamin'ny Blackberry voalohany nataoko dia nilaza tamin'ny namako izany aho ary nilaza izy fa tsy fantany ny antony ilain'ny olona azy ireo. Ny ampitson'ny ahitako ny ahy dia mahazo antso avy aminy amin'ilay vaovao aho.
1 Jul 2009 amin'ny 11:16 PM
Aza asiana eritreritra faharoa aho! 🙂
2 Jul 2009 amin'ny 6:22 PM
Mandevozin'ny Blackberry koa aho. Nahazo ny rivodoza koa aho
1 Jul 2009 amin'ny 11:05 PM
Mety aminao! Arahabaina amin'ny fanapaha-kevitra!
Ho an'ny twitter, ny tolo-kevitro dia UberTwitter… ary izany ihany no ilainao. Ny rindranasa zanatany dia ampy aleha.
Ankafizo ny Curve-nao… helo fitaovana!